Izindlu e- Fernhill - I-Airbnb
Izindlu e- Fernhill
Nagalur, TN, i-India
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-George
I-Fernhill Cottage, ekuqaleni yayakhiwe njengendawo yokuhlala yeholide yabanikazi, uDkt George Paul nomkakhe uDkt. Bini George.
Indlu yaphefumulelwa imodeli yamakotishi amaNgisi amadala aseYercaud akhiwa ekuqaleni kwekhulu lama-20. Indlu yakhiwe ngamatshe egwadle abaziwe afakwe ikhishi nezindlu zangasese zesimanje. Indlu inesitebhisi sokhuni esifinyelelwa ngezitebhisi esivunguzayo futhi singasetshenziswa njengendawo yokulala/yokuzijabulisa.
IFernhill Cottage ibizwa kanjalo ngenxa yobuningi bama-ferns asendle egqumeni eliphezu kwendlu ekhona. Ababungazi bangathanda ukuqasha indawo yokuhlala yasekhaya nabantu abanobungane, befuna iholide elinokuthula ezintabeni.
Indlu ithatha kalula abantu abadala abangu-4-6. Indlu inompheme obheke isigodi esiluhlaza se-oki esiliva namasimu ekhofi. Ehlezi kuvulandi nenkomishi yekhofi, umuntu angabona umoya uthatha ukuphuma kwelanga okwenza umbukiso omibalabala esibhakabhakeni njalo ekuseni. Indlu izungezwe ingadi yezimbali nedwala, amahektha amabili ekhofi (esanda kutshalwa) nezihlahla zezithelo. Ngezikhathi zakusihlwa kukhona i-crepuscular aura yokuthula ephulwa kuphela ukukhala kwamakhilikithi kanye nemisindo yomoya ezihlahleni.
Ukukhuphukela endlini kungamamitha angama-400 emigwaqo egandayiwe enqamula epulazini elincane.
Ikhishi lifakwe izitofu zegesi, i-microwave, isiqandisi, i-toaster nezinto zokupheka. Amanzi okuphuza atholakala ngesihlungi se-Aquaguard esixhunywe empompini wasekhishini. Amanzi awumthombo ohlanzekile futhi ane- purifier (RO) futhi awawona amanzi aqinile. Umsingathi unikeza ukudla kwasekuseni okunesizotha okuhlanganisa isinkwa, Ibhotela, Jam namaqanda kanye nento eyodwa yebhulakufesi yama-indian efana ne-Idli/ dosa/ poori, sambhar, chutneys noma sabji njll. Umnakekeli uzohlinzeka ngamasevisi angeziwe njengokuthola amalungiselelo, ukudla njll ukuze uthole okunye okuxoxiwe ngakho. izindleko. Umndeni upheka ukudla okuhlanzekile nokumnandi okubiza kancane.
4.92 · 189 okushiwo abanye
Njengamanje abekho abantu abahlala ngokugcwele endaweni. Inikeza ubumfihlo ngenkathi ifinyeleleka ezindaweni eziningi zezivakashi e-Yercaud. Indawo ezungezile ixutshwe nezindlu zezivakashi ezimbalwa ezihlakazekile kanye nethempeli lokuzindla endaweni ethile.
Ikhaya linomnakekeli ozohlinzeka ngezinsizakalo ezifana nokulanda ukudla noma izinsiza. Izinkonzo zakhe azifakiwe emalini futhi kungaxoxiswana naye kanye nabaphakelayo. Uhlu lwabaphakeli abanconyiwe kanye nezinye izinsizakalo ezifana nokubona nokuhamba ngezinyawo zizohlinzekwa. Ilineni elihlanzekile, amathawula, izingubo zokulala kanye nensipho kuzohlinzekwa njengengxenye yephakheji. Izinsizakalo zokuwasha zingahle zihlelelwe inkokhelo okuxoxiswene ngayo ngomnakekeli lapho etshelwa ngaphambili. Ngenxa yesimo se-Covid, siphakamisa ukuthi izivakashi zethu zingabhuki zibuyele emuva ukuze zinikeze umnakekeli wethu ukuthi aveze indawo futhi ayihlanze kahle ngaphambi kokufika kwesivakashi esilandelayo. Ngokufanelekile, amahora angama-24 kuye kwangama-48 phakathi kwezivakashi. Ijeneretha iyatholakala futhi izosetshenziswa ukushaja i-UPS
Ikhaya linomnakekeli ozohlinzeka ngezinsizakalo ezifana nokulanda ukudla noma izinsiza. Izinkonzo zakhe azifakiwe emalini futhi kungaxoxiswana naye kanye nabaphakelayo. Uhlu lwabap…